Sacuudiga oo hakiyey duqeynta Xuuthiyiinta iyo Iran oo soo dhaweysay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dowlada Sucuudiga ayaa shaacisay shalay gelinkii danbe in ay soo afjartay duqeyntii dhanka cirka oo ay ku waday muddo 27 maalmood ah gobalada dalkaasi Yemen.
Afhayeenka Ciidamada Isbaheysiga Sucuudiga Gen.Axmed Casiiri ayaa sheegay in duqyenta laga gaaray qorshihii laga lahaa oo ahayd in la burburiyo hubka waaweyn oo ay heystaan kooxda Shiicada ah ee Xuuthiyiinta, wuxuuna sheegay in dowlada Sucuudiga ay sii wadi doonto hawlaha militari ee ka dhan ah Xuuthiyiinta hadii loo baahdo.
Dhanka kale, dalka Iran ayaa ku tilmaamay go’aanka Sacuudiga uu ku joojiyay duqeymaha ka dhanka ah xuutiyiinta Yemen in ay tahay hormaar wanagsaan.
Wasiirka arrimaha Dibedda ee Iran Maxammed Javad Zarif ayaa ku baaqay in wadahadaala deg-deg ah la furo, gargaar bini’aadanimana la gaarsiiyo dalka Yemen.
Hogaamiyaha Shiicada dalka Lubnaan ee kooxda Xisbullah oo loo yaqaan Nasrullahi oo Jimcihii lasoo dhaafay isaguna ka hadlay dagaalka Yemen ayaa sheegay in Xuuthiyiinta Yemen ay guusha dhankooda raaci doonto.
Waxaa intii uu dagaalkan socday iyaguna cududooda militari sii xoogeysatay kooxda Al Qacida ee Jaziiradda Carabta, kuwaasoo la wareegtay qaar kamid ah xarumaha shidaalka laga soo saaro ee dalka Yemen, isla markaana ciidamada Yemen ka qabsaday Airporo militari ee degmada Mukalah iyo deked halkaas ku taalla.